Dadka qaarkiis waxay u maleyn karaan Chris Baggott, Ali Sales oo anigu gebi ahaanba waxaan nahay nuts… maxaan u maleynayaa Isku-darka aan iska daayo Maxaan uga tagayaa shirkad laba jibbaareysa cabirkeeda sanadba sanadka ka dambeeya? Waan jeclahay Compendium iyaguna way i jecelyihiin… maxay macno iigu samaynaysaa inaan is casilo?
In kastoo aan baxayo shaqada leh Compendium - kama tagayo Compendium Blogware. Xaqiiqdii, Compendium waa macmiilka koowaad ee DK New Media, LLC - wakaaladayda cusub. Waxaan sidoo kale saami ku leeyahay Compendium - anigoo ku hawlanaa shirkadda tan iyo markii la aasaasay. Waxaan sii wadi doonaa inaan hubiyo in Compendium ay guuleysato, sii wad inaad nag iyo Chris iyo Ali ka hesho muuqaalada iyo xoojinta :). Waxaan sidoo kale bilaabayaa hay'ad ii gaar ah oo hoos timaada Compendium… waxbadan intaas kadib.
Furaha guushayda guusha ee Compendium ayaa ah in macaamiisha gabi ahaanba la siiyo dareenka ugu fiican aqoontana la wareejiyo. Waxaan si dhow ula shaqeynayaa isgaarsiinta macmiilkayaga, guusha macmiilka iyo kooxaha iibka si aan u hubiyo inay taasi dhacdo - gacmahana la ii marin doono illaa Diseembar.
Chris, Cali iyo anigu waan aqoonsannay billo kahor. Fursadda loogu talagalay DK New Media si ay gacan cusub ugu noqoto macaamiisha Compendium iyo shirkadaha kale ee ka caawiya macaamiisha inay kordhiyaan maalgashiga ay ku samaynayaan baloogyada, warbaahinta bulshada, raadinta, emaylka, iwm. Waxaan si dhow ula shaqeynayaa Ali ee Compendium si aan u horumariyo xirmooyinka macaamiisha, laga bilaabo Isdhexgalka Warbaahinta Bulshada, Naqshadeynta Wax-u-qabashada Naqshadeynta iyo barnaamijyada kormeerka, Naqshadeynta Blog iyo is-dhexgalka, La-tashiga Istaraatiijiyadeed ee Sannadlaha ah, iwm.
Doug Theis ka Xarumaha Xogta Nolosha wuxuu ila mid dhigay "CMO for Hire". Waan jeclahay taas, aqoontayda tikniyoolajiyaduna si ballaadhan ayey ugu sii fideysaa. Xidhiidhka aan la leeyahay xirfadlayaal kale ayaa i siiya, maahan oo kaliya aqoonta, laakiin ilaha si loo hubiyo inaan sidoo kale ka caawin karo shirkadaha inay horumariyaan xalalka ay sidoo kale u baahan yihiin. Ma doonayo inaan noqdo la-taliyahaaga caadiga ah - markaan ku dhex socdo oo aan kuu sheego waxa aad u badan tahay inaad hore u taqaannay. Waxaan rabaa inaan noqdo lammaanahaaga oo waliba awood u leh fulinta istiraatiijiyadda iyo horumarinta xalka dhabta ah.
Kuwani waa dad aan la shaqeeyey oo aan ku koray kalsooni aad u weyn tobankii sano ee la soo dhaafay. Waxay u fuliyaan macaamiisha waana kuwa ugu fiican horyaalkooda. Taasi macnaheedu maahan inaanan sidoo kale taageeri doonin shirkaddaada? Dabcan maya! Waxaan rabaa inaan kobciyo meheraddaada waadna iga caawin kartaa inaan kobciyo tayda. DK New Media, LLC. waxay bilaaban doontaa Ogosto 1, 2009! La soco!